Kungenzeka yini ukuthola ama-backlink ekhwalithi kusuka kumasayithi aphezulu we-PR?
Uma udala izixhumanisi zesayithi lakho, udinga ukukhokha ngokukhethekile emithonjeni oyikhethayo kule njongo. Iningi elikhulu labaphathi bewebhu kanye nochwepheshe be-SEO abaphezulu bathi ama-backlink anamandla kakhulu adlulisa ijusi lokuxhuma elibalulekile elivela kumawebhusayithi aphezulu e-PR, njenge-Google, i-YouTube, i-Wikipedia noma i-Facebook.
Sizoqala lesi sihloko ngokucabanga ukuthi usuvele unayo i-akhawunti yebhizinisi ku-Facebook nakwebhusayithi noma okungenani ikhasi lokungena lenkampani yakho.
Ngakho, njengokwenza okuboniswayo, konke okudingayo ukudala ithrafikhi eminingi yekhwalithi ezungeze isayithi lakho ukudala okuqukethwe okulungiselelwe kahle usebenzisa amagama okucinga okufanele futhi wakhe ukwakha okulandelayo ngemuva kwamawebhusayithi we-PR.
Izindawo eziphakeme ze-PR ukuthola ama-backlink aphezulu
Kuyinto ebuhlungu ukuthola ama-backlink aphezulu ezizindeni zamandla aphezulu ikakhulukazi uma usanda kusungula isayithi lakho - wild vegas casino no deposit. Kodwa-ke, akufanele udikibale njengoba kunezinhlelo eziningi zokwakha izixhumanisi eziyingozi ezizokusiza ukuthi ufike ku-TOP yezinjini zokusesha esikhathini esifushane.
Ama-backlink aphezulu e-PR avela ku-YouTube
i-YouTube yipulatifomu ethandwa kakhulu ye-Google. Isikweletu samandla wesizinda salo mthombo wewebhu ngu-10 kwabangu-10. Ungathola ama-backlink aphezulu avela kulo mthombo, ulayishe ividiyo yakho lapho. Konke okudingayo ukwakha ividiyo eningiliziwe mayelana nemikhiqizo yakho noma imboni ngokujwayelekile futhi ulayishe le vidiyo kuwebhu. Ngemuva kwalokho, udinga ukufaka incazelo yevidiyo ebandakanyayo, kufaka phakathi i-URL yakho yesayithi kuyo.
Ama-backlink aphezulu e-PR evela ku-Wikipedia
i-Wiki ingenye ye-encyclopedia enkulu kunazo zonke eyenziwe ngosizo lwabavolontiya. Lo mthombo wewebhu uhlukaniswa yigunya kanye nokubaluleka kwalo. Yingakho unezinga eliphakeme kunazo zonke ku-Google ngemiphumela eminingi ehlukene yesicelo se-Authority ye-Wikipedia iphinde ibe ngu-10 kwabayishumi. Umthombo ophelele wokwethembeka nokwegunya kwanoma iyiphi i-domain noma ngabe ikhona entsha noma ikhona isikhathi eside. Kunezindlela eziningi zokuthola ama-backlink aphezulu e-PR avela kulo mthombo obalulekile. Kodwa-ke, uma kuziwa ekuqinisekiseni, izinto ziba nzima kakhulu. Ngaphambi kokushicilela noma yikuphi okuthunyelwe, abantu bangempela bahlole futhi bayayivuma. Yingakho i-backlink yakho ingasuswa ngesikhathi senqubo yokuqinisekisa ibhukwana.
Nokho, kunezindlela eziningana eziwusizo ezizokusiza ukuba uthole ama-backlink anamandla avela ku-Wikipedia naphezu kwemingcele:
Yakha ikhasi elisha ku-Wiki, ngokungashicileli lutho kulo. Ngesikhathi esithile leli khasi lizoba sesiteji sesimiso.
Bese ukhetha ikhasi le-Wiki ngeminye imibuzo engathandwa kakhulu bese unamathisela isixhumanisi sakho sesayithi ngaphezulu. Akunakwenzeka ukuqinisekisa wonke amakhasi, yingakho amavolontiya e-Wikipedia ayenandaba nje nemibuzo efundisayo engavamile.
Isixhumanisi sakho sizovela ohlwini lwemithombo yokubhekisela.
Kufanelekile ukuphawula ukuthi i-Wikipedia backlinks ayikho-ilandela izixhumanisi. Yingakho izixhumanisi ezivela kulo mthombo ngeke zikulethele. Kodwa-ke, ukwandisa ukwethembeka negunya lomthombo wakho wewebhu, kuphakanyiswa ukuthola ama-backlink kusuka kumasayithi aphezulu e-PR njenge-Wikipedia.